Joe Chikomo. Madzimambo achiri madzimambo ekutyisa | Zvazvino Zvinyorwa
Joe Chikomo ndomumwe wevanyori vaigona kungonyora chete zvinotyisa zvinyorwa. Kutanga, nekuti iwe unofanirwa kuona chete kumeso kwake kuti iye atiyeuchidze nezvemumwe munhu. Uye chechipiri nekuti, zvirokwazvo, kuti mumwe munhu ndibaba vake, Stephen King. Asi mukomana akada kuzviviga paakatanga, nekuda kwekuenzanisa kunogara kuchinyangadza. Kusvikira, kana azvibudirira iye ega, haachisina basa nazvo kuti zvizivikanwe.
Joseph Hillstrom Mambo akagara nhaka ye kutya kunotyisa ropa uye akavaka zvakare basa rakakura semunyori bestseller yerudzi iyo inogara ichikwezva. Izvo mumvuri wababa vake Yakanyanya kukura? Zvakanaka, pane zvinofarirwa nemunhu wese. Uye avo vanofarira kuve nenguva yakaoma, yekuti kune vaviri vakangwara kubva kumhuri imwechete kana vanogona kukochekera zvakafanana, zvakanaka, zvirinani pane zvirinani. Ikoko kunoenda kuongorora mamwe emabhuku ake.
1 Joe Chikomo
2.1 Sutu yevakafa
Ndakauya kuJoe Hill rimwe zhizha. Iwe enda pazororo uye unoda kunzvenga kuverenga. Ini ndanga ndatoita nharo naye Sutu yevakafa, 2007, uye, kunyangwe ini ndatoverenga zvakapetwa izvo Ini handisi wemhando inotyisa, Ndaiwanzoverenga chimwe chinhu nguva nenguva. Saka ndakatora iyo edition muhomwe kumahombekombe. Uye ndinoda. Zvakare Ndakava nenguva yakaipa, hongu, uye anga asati aziva kuti aive mwanakomana wa Stephen King, wandisina kuverenga chero chinhu asi zviri pachena kuti ndaona mamwe e zviuru zvinochinjika dzenyaya dzavo.
Chikomo chinoenda nenzira imwecheteyo, zviri zviviri mukutengesa zvakanyanya uye mushanduro yemabhuku ake eiyo cinema. Dzinotyisa dzinoshamisa dzinosanganisirwa nenyaya dzakanaka dzinobata uye ivo vanoverenga zvakanaka, pamwe vasina kukanda maroketi maererano nesitayera kana, ngatitii, nhoroondo yemhando. Akashandawo pamhando ye nyaya game Zvipoko uye izvo zve comicne Locke & Kiyi. Kune mazita akati wandei kare, asi ini ndinoongorora aya matatu.
Nhoroondo yake na debut, inotaura nyaya ye Judha Coyne, nyeredzi yakaenda pamudyandigere. Iye anogara kuimba yemba chete nemaneja wake uye musikana mudiki kwaari. Uye ndizvo muteresi yezvinhu zvine hukama ne zvemashiripiti. Iko kufarira kunozomutungamira bhiza chipoko pafandesi yepamhepo, uye mazuva mashoma gare gare, anogamuchira bhokisi risinganzwisisike rakaumbwa pamoyo rine sutu yemurume akafa. Uye zvechokwadi, iwo mweya, Craddock, hazvingatore nguva kuti zvioneke. Kutanga, nenzira isinganzwisisike asi munguva pfupi ichave yakanyanya kutyisidzira. Kana maneja wake akazviuraya, Coyne nemusikana wake sarudza kutiza kununura hupenyu hwavo. Asi hazvizove nyore zvachose.
Yaiva yake segunda novel uye mairi protagonist ndeye murume kuti rimwe zuva anomuka akanyarara kwazvo mushure mehusiku hwemapati. Nekutya, anoona izvozvo pahuma nyanga dzadhiabhorosi dzakabuda uye kuti, mukuwedzera, a simba zvemweya zvinokutendera verenga pfungwa zvisingataurike zvevamwe.
Chikomo chinokwidza a nhanho casi apocalyptic uko a denda yezvisingazivikanwe mavambo akapararira kwese kwese. Vanachiremba vanoidaidza kuti "Trichophyton draco incendia," uye kune iyo yepasirese nyika ndiyo Chiyero cheshato, one spore iyo inomaka ganda rehutachiona nemavara matema negoridhe usati waigadzira kuputika mumirazvo yemoto. Uye hapana mushonga kana mushonga.
Iye protagonist ndiye Harper Grayson uye ari mukoti. Akaroora, anoshanda muchipatara uye anorapa vanhu vanorwara vaanoona vachipisa nguva zhinji. Paanotapukirwa, anova nepamuviri uye murume wake anoita danho rakakomba, Harper anosarudza kuti anoda kurarama otiza. Asi iye anozivawo John Rookwood, anofungidzirwa kudzima moto kuti, kunyangwe uine hutachiona zvakare, haipisi uye yakadzidza kubatidza nekushandisa moto senhovo kune vakaurayiwa uye chombo kune avo vanoda kutsakatisa hutachiona. Ivo vaviri vanoenderana mune imwe mhando yemisasa yakavanzwa uko vanorwara vanohwanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Joe Chikomo. Madzimambo achiri madzimambo ekutyisa